Madaxweyne Obama Oo Mar Labaad ku guulaystay Madaxtinimadda Maraykanka | Somaliland.Org
Madaxweyne Obama Oo Mar Labaad ku guulaystay Madaxtinimadda Maraykanka
November 7, 2012	Washington (Somaliland.Org)- Madaxweyne, Barack Obama, ayaa mar labaad ku guuleystay xilka madaxtinimada dalka Mareykanka, waxa uu helay in ka badan codadkii loo baahnaa ee Electoral isaga oo helay 303, halka musharraxa la tartamaya ee Xisbiga Jamhuuriga Mitt Romney uu helay 206.
Waxa uu ammaanay dhamaan dadka Mareykanka ee u soo baxay inay codeeyaan. Waxa uu sheegay in ay u codeeyeen in ficil la sameeyo, laakiin siyaasad aanay u codeyn, waxa uu balanqaaday inuu wax ka qaban doono dhibaatada dhaqaalaha.
Inta badan ra’yiga dadka laga aruuriyay ee gobollada aadka loogu loolamay ayaa muujinaya in Obama uu xoogaa yar ku horeeyay tartanka loogu jiro aqalka cad ee looga taliyo dalka Mareykanka.
Madaxweyne Obama ayaa ku eedeynayay in Mr Romney uu dalka uun dib u dhigi doono. Mitt Romney ayaa isna waxa uu ku celcelinayay in siyaasadaha Madaxweyne Obama ay fashilmeen.
Previous PostDawladda Hoose ee Hargeysa oo xadhiga ka jartay wadada 150-kaNext PostMuuse Biixi oo Taageereyaasha KULMIYE ku guubaabiyay inay soo saaraan murashaxiintooda	Blog